အဆိုတော်ရေမွန်သေဆုံးတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းတွေကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ နီနီခင်ဇော် – Shwe Nay Chi
အဆိုတော်ရေမွန်သေဆုံးတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းတွေကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ နီနီခင်ဇော်
အဆိုတောျ နီနီခငျဇောျကတော့ ဝါသနာပါရာ ဂီတလှုပျရှားမှုတှေ လုပျဆောငျရငျး ပရိသတျတှရေဲ့ တစျခဲနကျ အားပေးမှုတှကေို သိမျးပိုကျရရှိထားသူ တစျဦးပဲ ဖွစျပါတယျ။ လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဖွစျပေါျနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုမြားမှာလညျး ကရြာအခနျးကဏ်ဍကနေ ပါဝငျကူညီ အားဖွညျ့ပေးေ နတာလညျး ဖွစျပါ
တယ်။ သူမ တတ်မြောက်ထားတဲ့ ဆေးပညာရပ်တွေနဲ့လည်း ဆေးရုံတက်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူများအတွက် ပရဟိတဆေးခန်းတွင် ဆေးကုသေ ပးနေသူပါ။ရဲရင့်ပြတ်သားပြီး အရေးကြုံတဲ့အခါတိုင်း ပြည်သူတွေဘက်ကနေ တစ်သွေးတည်း တစ်သားတည်း ရပ်တည်ပေးနေ တာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေ
က လေးစားအားကျနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမှီကလည်း လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ရင်း ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သူရဲကောင်း ကိုချစ်မင်းသူရဲ့ဇနီးကို ကလေးမီးဖွားပေးခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ အားလုံးကကျေးဇူးတင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်. ဒီနေ့မှာလည်း အဆိုတော် ရေမွန် ကွယ်လွန်သွားတဲ့
အကြောင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး ” စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်သာ ချန်ခဲ့ပါ အကိုရေ သူဒီပုံလေးတင်တုန်းက Save ထားခဲ့မိတာ အခုဒီအချိန်မှာပြန်တင်ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ပါဘူးရုတ်တရက်နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တဦး, သူဖန်တီးသောအရာများ လေးစားမြတ်နိုးမိသော သူရဲ့ပရိသတ်များ (ကျမ အပါအဝင်)
ဝမ်းနည်းငိုကြွေးကြရပါတယ်…REST IN PEACE, REST IN POWER BROTHERသေကွဲ ရှင်ကွဲ ကွဲကွာခဲ့ကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်
ဆုံးရှုံးကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ နွေဦးပန်းတွေအတွက် ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာရေးသားထားပါသေးတယ်. အနုပညာရဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်လေး ကြွေသွားရတဲ့အပေါ်မှာလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်နော်.
အဆိုတော် နီနီခင်ဇော်ကတော့ ဝါသနာပါရာ ဂီတလှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးမှုတွေကို သိမ်းပိုက်ရရှိထားသူ တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုများမှာလည်း ကျရာအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ကူညီ အားဖြည့်ပေးေ နတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ
တတ်မြောက်ထားတဲ့ ဆေးပညာရပ်တွေနဲ့လည်း ဆေးရုံတက်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူများအတွက် ပရဟိတဆေးခန်းတွင် ဆေးကုသေ ပးနေသူပါ။ရဲရင့်ပြတ်သားပြီး အရေးကြုံတဲ့အခါတိုင်း ပြည်သူတွေဘက်ကနေ တစ်သွေးတည်း တစ်သားတည်း ရပ်တည်ပေးနေ တာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက လေးစားအား
ကျနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမှီကလည်း လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ရင်း ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သူရဲကောင်း ကိုချစ်မင်းသူရဲ့ဇနီးကို ကလေးမီးဖွားပေးခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ အားလုံးကကျေးဇူးတင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်. ဒီနေ့မှာလည်း အဆိုတော် ရေမွန် ကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပက်
သက်ပြီး ” စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်သာ ချန်ခဲ့ပါ အကိုရေ သူဒီပုံလေးတင်တုန်းက Save ထားခဲ့မိတာ အခုဒီအချိန်မှာပြန်တင်ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ပါဘူး
ရုတ်တရက်နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တဦး, သူဖန်တီးသောအရာများ လေးစားမြတ်နိုးမိသော သူရဲ့ပရိသတ်များ (ကျမ အပါအဝင်) ဝမ်းနည်းငို
ကြွေးကြရပါတယ်…REST IN PEACE, REST IN POWER BROTHERသေကွဲ ရှင်ကွဲ ကွဲကွာခဲ့ကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဆုံးရှုံးကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ နွေဦးပန်းတွေအတွက် ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာရေးသားထားပါသေးတယ်. အနုပညာရဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်လေး ကြွေသွားရတဲ့အပေါ်မှာလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်နော်.
ဆုံးပါးသွားတဲ့ တော်လှန်ရေးရဲဘော်ရေမွန်အတွက် နာကျည်းစိတ်နဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟလာခဲ့တဲ့ ထားထက်ထက်ရဲ့ရင်တွင်းစကား